Asan-jiolahy eto Antananarivo Misy marika mora hahafantarana ireo mpanendaka
Araka ny fandiniky ny mpanara-vaovao maro tamin’ireo sary navoakan’ny mpitandro filaminana, nandritra ny taona maro izay nivalona, tsikaritra ny« Kavin’ila, hety volo maningana na miloko, ahitana famantarana loko mena mainty maitso mavo” izay fifankafantaran’ireo tambazotran-jiolahy.Tato ato, niampy fanamian’ny
fanatanjahantena na an’ny kandida ary an’ny fiangonana no entin’izy ireny. Samy ny 29 desambra teo tamin’ny 2 ora tolakandro. Mpanendaka dimy mirahalahy no voasambotra teny Ambodin’Isotry fitobiam-pako. Rehefa nahatazana ny Polisy izy ireo dia nandositra ka nifanenjehana ka azon’ny polisy niaraka tamin’ny finday noesorina “puce”. Nilaza ny mpivarotra sy ny mponina fa izy ireo no mpampitondra faisana eny an-toerana. Tamin’ny famotorana no nilazany fa io no asa hameloman-dry zareo ny ankohonany. Nahitana lehilahy miisa roa mailomailo vaky nandositra koa raha nahatsikaritra mpitandro filaminana teo Isotry. Raikitra ny fanenjehana ka voasambotra. Natao ny fisavana ka antsy sy rongony no tratra tany amin’izy roalahy. Teo amin’ny EPP Ambodin’Isotry kosa no voasambotry ny polisy koa ny mpanao sintomahery raindahiny antsoina hoe “Mainty”. Tratra teo am-panarahana olona mpiantsena
izy. Nahatratrarana rongony tany aminy.